Faịlụ ndọtị. Kedu ihe ha bụ na otu esi ahụta ndọtị zoro ezo | Akụkọ akụrụngwa
Faịlụ ndọtị. Kedu ihe ha bụ na otu esi ahụta ndọtị zoro ezo
Mmanya na-egbu egbu | | software
LFaịlụ anyị nwere na kọmputa anyị nwere ike na-egosi na ihuenyo na ụzọ abụọ, ihe atụ, ọ bụrụ na ị nwere a faịlụ abịakọrọ akpọrọ "file32" ị nwere ike ịhụ ya na kọmpụta gị dị ka "file32" ma ọ bụ ikekwe dị ka "file32.zip" ma ọ bụ "file32.rar". Ọ bụrụ n'ịhụ nanị akụkụ nke aha "file32" kọmputa gị na-eme ndọtị ndọtị, dị ka ọ na-adịkarị na ndabara na Windows XP (Amaghị m otú ha ga-esi bata na Vista), ugbu a ọ bụrụ na ị hụ faịlụ ahụ na njedebe ".zip" ma ọ bụ ".rar" (ọ nwekwara ike ịbụ ọtụtụ ndị ọzọ dịka ".arc" ma ọ bụ ".exe», ọmụmaatụ) kọmputa gị na - enye gị ohere ịhụ mputa faili.
AUgbu a ị nwere ike ịmata ma ọ bụrụ na egosiputara mgbakwunye faịlụ ahụ ma ọ bụ zoo ya na kọmputa gị naanị site na ịme ule gara aga, mana kedu ndọtị na gịnị ka ha bụ?
Gịnị bụ faịlụ ndọtị?
N'asụsụ nzụkọ ọnụ anyị nwere ike ịsị na ndọtị faịlụ bụ okwu na-ejikarị, ọ bụghị mgbe niile, nke mejupụtara akwụkwọ ozi atọ yana na ọ kewapụrụ aha faịlụ ahụ site na oge. Ihe atụ ụfọdụ nke ndọtị bụ: .zip, .pps, .exe, .pdf, .jpg, .avi, .3gp, .pando, .png, .bmp, .mov, .html, wdg.
Gịnị ka ha bụ?
Sistemụ arụmọrụ dị ka Windows na-eji ndọtị amata usoro faịlụ. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na ị hụ faịlụ akpọrọ "uncompressed.rar" ị mara na ọ bụ faịlụ abịakọrọ n'ihi na, ọ bụ ezie na aha ya na-ekwu ma ọ bụghị, ọ nwere ndọtị ".rar" nke kwekọrọ na otu n'ime ụdị ndọtị na-eji faịlụ abịakọrọ.
AỌ bụ ezie na a naghị ahụ ndọtị ahụ, sistemụ arụmọrụ ga-agụ ha ebe ọ bụ na ha ka jikọtara na faịlụ ahụ ọbụlagodi na ị hụghị ha. N'ụzọ dị otú a kọmputa ga-enye gị ohere ịme ụfọdụ ọrụ ma ọ bụ ndị ọzọ nwere faịlụ ahụ dabere na ndọtị ya.
PI nwere ike ịnọ na-eche ihe mere m ji chọọ ịhụ ndọtị faịlụ ọ bụrụ na kọmputa amatalarị otu esi ejikwa ha n'agbanyeghị na anaghị m ahụ ha? Ọ dị mma, e nwere ọtụtụ ihe:
Primero n'ihi na otú ahụ ị ga-enwe ike ịchịkwa faịlụ na kọmputa gị na ị ga-mma nchekwa n’ime ya.
Ọ bụrụ, dịka ọmụmaatụ, ibudata onyonyo na calledntanetị akpọrọ "foto.jpg.exe" ma ị nwere ndọtị zoro ezo, ị ga-ahụ "foto.jpg" naanị n'ihi na nke a kpọmkwem na ndọtị a bụ ".exe" nke kwekọrọ na faịlụ a na-arụ ọrụ. Emebila, cheta na ndọtị ahụ na-aga na njedebe nke faịlụ ahụ. Ọ bụrụ na akpọrọ faịlụ ahụ «fotografia.jpg» ọ ga - abụ onyogho na ndọtị «.jpg», mana ebe a na - akpọ faịlụ ahụ «fotografia.jpg.exe» na mgbakwunye bụ «.exe» ma yabụ ọ bụ mmemme onye choro izochi n'ile ihe osise.
Nke a nwere ike ịpụta na mmemme ahụ a na-ekwu bụ virus ha chọrọ ibanye na ya. N'ọnọdụ ọ bụla, ọbụlagodi na ịnwere ndọtị zoro ezo, sistemụ arụmọrụ ga-amata na ọ bụ faịlụ a na-egbu egbu ma ya mere ọ ga-eweta ya na ihuenyo dị ka icono nke mmemme ma obughi nke onyogho. Ma ọ bụrụ na ị naghị a anda ntị ma ghara ịchọpụta nkọwa ahụ, ịnwere ike ịwụnye nje ahụ na-eche na ị na-emepe ihe oyiyi.
Nke abụọ n'ihi na ọ bụrụ na ị na-eso nke ọ bụla n'ime nkuzi ndị ị nwere ike ịchọta ebe a VinagreAssino.com ị ga-ahụ na m na-agakarị faịlụ na aha ha na ndọtị. Wayzọ a ọ dị mfe soro ntuziaka ọ dịkwa mma na ị ga-eji, ọ bụrụ na ịnọbeghi, iji nwee ike ịchịkwa ihe ị na-eji kọmputa gị.
SỌ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ mgbakwunye nke faịlụ (ma ọ bụ faịlụ) na kọmputa gị ma ịchọrọ ịhụ ha, nke a bụ ihe ị ga-eme iji mee ka ha pụta na ihuenyo.
Nke 1) Anyị kwesịrị imeghe windo nyocha ọ bụla. A ngwa ngwa ụzọ na-eme ya site abụọ na ịpị "My Computer". Na onyonyo dị n’okpuru ị ga - ahụ ebe atọ ị ga - ahụ akara ngosi “My Computer”. Site Malite menu, na desktọọpụ, ma ọ bụ na Ndenye Mwepụta na taskbar.
Nke 2) Mgbe mpio a na-akpọ "Kọmputa m" mepee, pịa n'elu windo ebe ọ na-ekwu "Ngwaọrụ". Ma na menu ndọpụta nke mepere, pịa na "nchekwa nchekwa ..." nke dị na ala menu ahụ.
Nke 3) Mpempe "Nhọrọ nchekwa" ga-emeghe, nwere taabụ atọ. Pịa na taabụ "Lee" wee pịgharịa gaa n'akụkụ akụkụ ala (lee onyonyo ahụ) site na mpaghara akpọrọ "Advanced settings" ruo mgbe ị hụrụ nhọrọ ahụ "Zoo ndọtị faịlụ maka ụdị faịlị amaara" a ga-aka akara. Ihe ị ga - eme bụ ịkwụsị igbe ahụ ka ị wee nwee ike ịhụ ndọtị zoro ezo. Mgbe ịmechara ya, pịa bọtịnụ "Tinye na folda niile" n'elu na mpaghara a na-akpọ "Ele Folder". N'ụzọ dị otú a, anyị ga-eme ndọtị nke faịlụ niile na folda niile. Na onyonyo dị n’okpuru, egosiri na ihe niile ga - abụ ntụnye aka.
Na-esote, windo akpọrọ "Ele Folder" ga-emepe ebe sistemụ arụmọrụ na-ajụ gị ma ịchọrọ ịhazi nchekwa niile na kọmputa ahụ iji dabaa ntọala ị tinyegoro. Pịa na "Ee" ma gaa n'ihu.
Nke 4) Wee pịa bọtịnụ "Tinye" na akuku aka nri ala nke windo "Nchekwa Nhọrọ" ka mgbanwe ndị ahụ emere wee zọpụta.
N'ikpeazụ, pịa "OK" iji mechie windo ahụ.
AUgbu a, a na-ahụ ndọtị faịlụ ma ị ga-enwe ike ịchịkwa ha. N'ikpeazụ, gụọ ndụmọdụ a iji zere nsogbu:
Ugbu a, mgbe ị gbanwere aha faịlụ ọ bụla ị ga-ege ntị agbanwela ndọtị iburu faịlụ ahụ. Sistemụ nrụọrụ ga - adọ gị aka na ntị ma ọ bụrụ na ị gbalịa ime ya, mana ọ bụrụ na ịmee ya na ndudue, ọ nweghị ihe mere, nyegharịa ya site na itinye mgbatị kwekọrọ na njedebe.
Echekwala na ị ga-emeli ya gbanwee site n'otu usoro gaa na ọzọ naanị site na ịgbanwe faịlụ ndọtị. Ọ bụrụ na ị nwere vidiyo a na-akpọ "video.avi", echela na site na ịtụgharị ya "video.wmv" ị gbanweela ya na usoro Windows Media Video (wmv). Faịlụ ahụ ga-anọgide na-abụ vidiyo na usoro "AVI" yana naanị ihe ị ga - enweta bụ na sistemụ arụmọrụ agaghị emepe ya na ngwa kwekọrọ na ya mere ị gaghị enwe ike ịlele ya.
BNke ahụ niile bụ maka njikọta na ihe kpatara ya ji baa uru na anyị nwere ike ịhụ ha ma ghara izobe ha. N'isiokwu ọzọ anyị ga-ahụ ihe mgbatị kachasị (zip, avi, bmp, ...), ụdị usoro ha na-anọchi anya (abịakọrọ, vidiyo, onyonyo, ...) na ihe mmemme anyị kwesịrị iji nke ọ bụla. Ruo mgbe ahụ ekele m vaịn.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Faịlụ ndọtị. Kedu ihe ha bụ na otu esi ahụta ndọtị zoro ezo
Ihe 57 kwuru, hapụ nke gị
eme 15 afọ
You ma ọ bụla aghụghọ iji nyegharịa faịlụ site na ndọtị zoro ezo site na ịgbanwee ndọtị yana. Odi m ka igu ya ebe o gha aghaghi itinye ya na akara edemede. Aga m na-ele anya.
Mmanya na-egbu egbu dijo
eme 14 afọ
Kedu ihe kpatara ị chọrọ ịgbanwe ndọtị?
Zaghachi egbu mmanya
Achọrọ m ịmụ ihe ọhụrụ
Zaghachi ANA LUISA
Agbasoro m usoro niile na faịlụ anaghị ahụ anya ... ha bụ onyonyo
Kedu ihe m nwere ike ịme? achoro m ha
Zaghachi ka miguel
Ọfọn, enweghị echiche Miguel, na tiori ị kwesịrị ịhụ ha.
Emi 22 dijo
Emere m usoro ị rịọrọ m maka mmanya na-egbu egbu ...
ma ugbu a, m ga-etinyere ya ma ọ bụrụ na m nwee ihe ịga nke ọma, aga m edegara gị akwụkwọ ma ọ bụrụ na ọ bụghị, anyị ga-ahụ gị Kuidense ...
hello mmanya nsogbu m bụ ihe ndị na-esonụ iziga ka ịkpụzi pc m ma arụnyere m ọtụtụ mmemme mana n'oge nbudata windo ndụ onye ozi ọ naghị agba mmemme ahụ ozi ahụ abụghị ezigbo win32 ngwa ma ọ bụrụ na ị na-eduzi m ntakịrị
Ihe mbụ bụ na ị na-ele ndọtị ị nwere, ị ga-ama ka ọ bụghị? Mgbe ahụ ọ bụrụ na ị hụghị ihe ọ bụla dị iche, ọ ga - abụrịrị .exe ma ọ bụ mpịachi .rar ma ọ bụ .zip (na - abụkarị), ịnwere ike ibudata mmemme maka sistemụ arụmọrụ ọzọ (ọ dị obere ma ikekwe). Gbalịa na nbudata ya ma ọ bụrụ na ihe niile na-aga nke ọma, antivirus ga-agabiga ma ọ bụrụ na ihe gara aga agaghị atụkwasị obi. Ekele.
Ndewo, lee, achọrọ m ịma ka m si ehichapụ faịlụ, folda ma ọ bụ ndọtị ọ bụla nke na-emebi ma ọ bụ na-ebelata pc na otu m si achọpụta ya.
ndọtị na-anaghị arụ ọrụ maka pc m.
Zaghachi ka edith
Daalụ, fancy, daalụ mercenary!
Zaghachi na ultragon
M zigara ụfọdụ faịlụ AutoCAD (DWG ndọtị), MA KWURU N'FROMLỌ NKWUKWU A, ha na-eweta mmụba VEM H .Kedu ka m ga-esi meghee ha?
Daalụ maka enyemaka gị
Ọ dị mkpa ịnwe ihe nzochi zoro ezo
Zaghachi LUIS MIGUEL
inyinya oso dijo
proteus ares Enweghị m ike ịwụnye na cpu m mgbe m mechara wụnye mmemme a enwetara m mgbasa ozi na-ekwu na faịlụ licence.exe na-efu, kedu ka m ga - esi mezie ya, kedu ihe m ga - eme?
eme 13 afọ
Ekele dịrị enyi, ị zọpụtara ndụ m, enwetara m ọtụtụ faịlụ ma enweghị m ike ịhụ ndọtị ahụ, a na m agagharị ụfọdụ ihe ma agbagọkwa m dị ka onye na-ekwu zọpụtara m, daalụ ọzọ
Kedu ka m ga-esi hụ faịlụ ndị nwere sqm mmụba na m nwere ụfọdụ faịlụ m na-enweghị ike ịhụ mmeju ha anaghị m ama ma m ga-ehichapụ ha
Dị ka ọmarịcha mgbe niile, daalụ
Zaghachi na Rubentdf
Biko nyere m aka
Enweghị m ike ịnwe vidiyo na pc m na ha zitere m na .3gp ndọtị
ihe m kwesiri ime ?????????
AKW .KWỌ dijo
Ezigbo ihe ederede, a na m achọ ozi na ndọtị kachasị mma na vidiyo iji bipụta na ibe weebụ, enwere m ekele maka nduzi gị g .grcs
Ndewo, ị hụrụ, m na-eji antivirus na mgbochi rootkits n'ihi na kọmputa m bu oria na weebụsaịtị ndị ọzọ ha kwadoro ịghara izobe faịlụ na ndọtị iji chọta ha ma enweelarị m.
Mana kedụ ihe ijuanya m na mgbe m na mpaghara na folda ọ bụla achọtara m narị faịlụ ezoro ezo nke akara ngosi ya pere mpe, ọ na-eju m anya n'ihi na ọtụtụ bụ ihe m hichapụ ọnwa ndị gara aga.
Ajuju m nwere ike ihichapụ faịlụ ndi a ọzọ ka ọ bu ihe ga - eme?
daalụ na ị zọpụtara m
Kedu ka m ga-esi hụ ozi ịntanetị na mgbakwunye WMV na AVI.
Ndewo ekele nsogbu m bụ na achọrọ m ịtinye ọfịs microsoft na m ebudatara ya mebiri emebi ma ha gwara m na ọ ga-agbakwunye ya na mgbakwunye exe na m mere ya mana ọ nweghị ihe mepere ma ugbu a nke kpatara nsogbu na ugbu a enweghị faịlụ exe m meghere akara ngosi ọ bụla ma emeghị mmemme ndị ahụ. Enwere m olileanya na enyemaka gị ga-ekele….
Zaghachi ka enke
egbu egbu mmanya…. daalụ maka ozi gị ... eziokwu bụ na ha magburu onwe ha ... mana ịmara ... Achọrọ m izipu onyonyo na email m enweghị ike ... kedu ihe m ga-eme
NA EBERE ha gburu m nke mmetụta
Ebe dị mma ma ọ bụ ozi na-ezighị ezi
ndewo ekele maka nke ahụ mana ọ nweghị ihe ndọtị kachasị mara
Zaghachi juan camilo
eme 12 afọ
Daalụ! Ihe omuma a bara uru nke ukwuu, abanye m xk m ọ dara na-ezighi ezi k ihe niile nwere ndọtị na njedebe, agbanyụrụ m ya xD
Enwere m CD na foto m enweghị ike ịlele na ihe ọ bụla ọzọ karịa pc, ndọtị nke foto ndị ahụ .oca, enwere onye na-ekiri ma ọ bụ onye ntụgharị nke na-enye m ohere idekọ ha ka m lelee ha na igwe onyonyo
Enwere m JPG IMAGE NA Achọrọ m na mpempe akwụkwọ maka Mbipụta na MAGAZINE NA HA NA-AJ ME M IHE MERE, nke m na-enweghị dị ka ihe ngosi na m ga-eme ka m wee nwee ike bipụta ya MAGAZINE, EBERE M T ITR ITTA YA NA PDF FILE NA ADOBE MA AMAGH I M Ọ B IFR IT NA O ZU EGO YOU P YOUR YOU M Nyere M Biko
Ọ ga-amasị m ịmata ihe bụ ederede na ndọtị oyiyi
biko ngwa ngwa
owu ọmụma dijo
Papa m ike m hụrụ ya n'anya !!!!!!!!!
Nzaghachi owu ọmụma
Ngwa, achọrọ m foto na ihe ngosi ihe ngosi !!!!!! nwere ike inyere m aka ???????
Na vidiyo !!!!!!!!!!!!!!!!! :
Enweghị m ike ịhụ faịlụ vidiyo na ndọtị .exe na WMP 11. Kedu ihe ị kwadoro?
Ọ bụ oge mbụ m na-eleta ibe gị, yana etu esi hụ mgbakwunye faịlụ ọ bara ezigbo uru
Daalụ nke ukwuu
biko achọrọ m enyemaka chọrọ m ịgbanwe faịlụ site na zip ka usoro jpg
n'ihi na ọ dịghị onye na-ebipụta nke a na n'ihi na ọ dị ka amachibidoro m aghọtaghị
Zaghachi ka waldo
eme 11 afọ
Daalụ, ọ nyeere m aka nke ukwuu. Mma kọwara na-agaghị ekwe omume ịchọta.
Zaghachi ka enzo
hello lee nsogbu m anya na enwere m faịlị nwere db ndọtị ma ọ naghị emepe ihe omume ọ bụla m nwere, kedụ ka m ga-esi mee? ọ kwesịrị m ibudata onye njikwa? daalụ n'ọdịnihu maka enyemaka gị.
M ugboro ugboro na-enweta site na ndị enyi m, ozi ịntanetị na faịlụ na .wmv ndọtị
Kedu ka m ga - esi mara ma m ga - emeghe ha nwayọ, maka na ha atụla m ụjọ na nje virus? Enwerem Avira, AVG na Avast antivirus
Pink floyd dijo
Ndewo egbu egbu mmanya,
Ajuju m bu nke a; Enwere m mmemme iji wụnye .exe, ebudatara m ya mana enweghị m ike ịgba ya na kọmputa m ma ọ nweghịdị amata ya dịka ọ dị, n'ụdị winrar auto-executable file, agbanyeghị ndị ọzọ mmemme iji wụnye na-eme. Na mgbakwunye, otu mmemme a, m nwere ike ịhụ ya, buru ya ma mee ya n'enweghị nsogbu na kọmputa ndị ọzọ.
Zaghachi onwe m
Kedu ihe bụ foto, ọdịyo na vidiyo?
Achọrọ m enyemaka, iji zoo ọdịnaya faịlụ m kpochapụrụ ndọtị ha ma mata ha naanị dị ka faịlụ, ugbu a anaghị m echeta ndọtị ha nwere, kedu ka m ga-esi chọpụta ndọtị mbụ nke faịlụ m?
Super GOOD ihe omuma enyere m aka nke ukwuu i meela nke ukwuu 😉
enyere m pc furu efu .exe na enweghị m ike imeghe mmemme ọ bụla exe nyere m aka
Ndewo, ezigbo ihe niile ị kọwara m na-ajụ gị ma m budata vidiyo ma ọ bụ ihe nkiri sitere na ares, ebe ị na-ebudata m chọrọ ịhụ ka obere ịbudatara na ọkpụkpọ ares n'onwe ya iji hụ ma ọ bụ ihe nkiri ahụ ma ọ bụ vidiyo m na-achọ there Nwere ihe ize ndụ nke nje na-ejide m?
Daalụ nke ukwuu, m na-ekwu na ị nyeere m aka nke ukwuu. Enwere m nnukwu nkụda mmụọ n'ihi na amaghị m otu esi gbanwee ndọtị nke faịlụ na ihe ndị ọzọ. Daalụ!(:
Achọrọ m ịma otu m ga - esi zipu ozi-e yana na onye ọbụla natara ya ga - emepe ya n’onwe ya. Daalụ
Achọrọ m enyemaka, ngwa ngwa!
Achọrọ m onye ga-enyere m aka, enwere m ọtụtụ ihe oyiyi iso nke m mepụtara na folda vidiyo_ts, mana ebudatara m ụfọdụ fim na usoro m2ts ma m gụọ na m nwere ike ịgbanwe usoro a na-abanye na folda nhọrọ, lee taabụ ma wepu igbe iji zoo faịlụ ndọtị ma ọ bụ ihe dị otú a, na ọfụma m na-esure ihe nkiri mana ugbu a ihe nkiri m bụ ISO achọghị ijide DVD m wee tinye popcorn ọzọ na nke ndọtị ọ wee bụrụ otu, onye nwere ike inyere m aka ga-abụ nke nnukwu enyemaka.
Ndewo ebe ahụ!! Achunyela m ares ma jiri ya, m gbanyụrụ kọmputa m ma mgbe m gbanyere ya ọzọ achọrọ m iji Ares ma gwa m na ọ naghị amata faịlụ exe. Amaghị m otu m ga-esi edozi ya, ị nwere ike inyere aka mụ na nkọwa dị mfe?, nke ahụ bụ, ọ bụghị nka na ụzụ, na enwere m ike ịghọta gị nke ọma, Daalụ nke ukwuu n'ọdịnihu, A amakụ
Aghotaghi moooooooooooooooo ...
Ụtụtụ ọma! Mgbe m dechara kaadị ebe nchekwa m na ekwentị m ma jikọọ ya na pc iji tinye data, ọ na-agwa m na o nwere mgbakwunye exe na ekwentị m anaghị agụrụ m ya, gịnị kpatara nke a ji eme? Na na ndọtị ọ ga-abụ ka ekwentị m gụọ ya? Daalụ!!!
Ndewo enyi, kedụ otú i mere? Enwere m nsogbu na enweghị m ike ijide onyonyo site na faịlụ nke ihe nkiri bd25 ma ọ bụ na mpempe ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ m maara, ị nwere ike inyere m aka kelee
Ndewo, unu niile. Enwere m nsogbu, enwetara m faịlụ na ntinye jpf ma amaghị m mmemme ma ọ bụ ngwa iji mepee ya, ị nwere ike ịgwa m ngwa ọ dabara na ya, daalụ n'ọdịnihu
ngwa ngwa dijo
Echere m na nke a jọgburu onwe ya, ihe a niile abaghị uru
Ana m akwado vanesa nke a bụ ihe arụ
Nyefee maka 44 XBox 360. Otu esi emeri Xbox 360 n'efu na MSN na Buddy
Ebe ọ bụla FM. Otu esi emepụta akaụntụ na Anywhere.FM iji gee egwu gị n'ebe ọ bụla